RASMI: Manchester United Iyo Arsenal Oo Koox Lama Filaan Ahi Ku Garaacday Saxeexa Weeraryahan Dhaliyey 48 Gool Iyo 20 Caawimood - Gool24.Net
RASMI: Manchester United Iyo Arsenal Oo Koox Lama Filaan Ahi Ku Garaacday Saxeexa Weeraryahan Dhaliyey 48 Gool Iyo 20 Caawimood
Manchester United iyo Arsenal ayaa waji gabax kala kulmay gool-dhaliye ay si weyn u doonayeen oo loo arko mid ka mid ah xiddigaha mustaqbalka ee shabaqa saaxiibka la ah, kaas oo dhaliyey 48 gool 20 kalena caawiye ka noqday laba sannadood oo uu ka ciyaaray heerka koowaad.
20 jirka reer Canada ee Jonathan David ayaa ka leexday kooxaha horyaalka Premier League, waxaana si lama filaan ah heshiiskiisa ugu dhowaaqday kooxda Faransiiska ah ee Lille oo €30 milyan oo Euro kagala soo wareegtay Gent oo ka dhisan waddanka Belgium.
Weeraryahankan ayaan la sheegin sababta uu ku doortay Lille, hase yeeshee waxa la ogyahay in kooxaha horyaalka Premier League ee Manchester United, Arsenal, Leicester City, Leeds United, Brighton iyo Crystal Palace ay dhamaantood dul taagnaayeen oo ay raadinayeen sidii ay ula soo saxeexn lahaayeen.
Xili ciyaareedkii hore ee 2018-19 ayaa ugu horreysay inuu ka ciyaaro heerka koowaad, waxaanu wacdaro ka dhigay horyaalka Belgium oo uu ka dhaliyey 14 gool iyo shan gool oo kale oo uu caawiye ka noqday, ka hor intii aanu fasal ciyaareedkan dhalinin 23 gool iyo siddeed kale oo uu caawiye ka noqday kaliya 40 kulan oo uu saftay.
Waxa u dheer in xulka qaranka waddanka Canada uu u saftay 12 ciyaarood oo kaliya, laakiin uu u dhaliyey 11 gool isaga oo ka garab ciyaarayay xiddiga Bayern Munich ee Alphonso Davies.
Lille ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in dhaliyahan halista ah ay kala soo wareegtay Gent, isla markaana uu qalinka ku duugay heshiis shan sannadood ah.
Waraysi kooban oo uu isaguna siiyey website-ka kooxdiisa cusub ayuu ku sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay inuu ku biiro kooxdan, muddo dheerna uu sugayay inuu helo mashruuc nooqan oo kale, waxaase uu caddeeyey dadkii ku qanciyey inuu naadigan ku biiro oo ah Madaxweynaha iyo tababaraha Lille ee Luis Camps iyo Christophe Galtier.
David ayaa waxa uu Lille u buuxin doonaa kaalintii uu banneeyey Victor Osimhem oo ay bishii hore Napoli kaga iibsatay €50 milyan oo Gini, isla markaana noqday xiddigii ugu qaalisanaa ee u dhashay qaaradda Afrika.
David waxa uu durba galay taariikhda Lille oo uu noqday ciyaartoygii ugu qaalisanaa abid ay kooxdaasi iibsato, waxaanu jabiyey rikoodhkii ay xagaagii hore kooxdu Bayern Munich kagala soo wareegtay Renato Sanchez oo ahayd lacag dhan €25 milyan oo Gini.